कोरोना कम्प : कोभिड–१९ महामारी महाभूकम्पभन्दा पनि पीडादायी
भूकम्पको प्रभावपछि मानिसहरू विदेश गएर जीविकोपार्जन गरे, अहिले भने विदेशबाट फर्किएर खेतीपाती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
युवाहरूका समूह, युवा क्लबले दे शै भरिराहत वितरण तथा निस्शुल्क खानाको व्यवस्था गरेका छन् । कतिले व्यक्तिगत तहमा यस्तो सहयो ग गरिरहेका छन् । केहीले राहत समिति बनाएर सघाएका छन् ।
लकडाउनमा बुद्धिसागर : मन जान छाड्यो मम:मा, लेख्न थाले राति
बुद्धिसागरलाई एक सातासम्म भात नखाए पनि हुन्छ, तर मम: नभई हुन्न । उनीबारे ठट्टा बन्न सक्छ– उनी लेख्नमात्र होइन, मम: खान पनि जन्मिएका हुन् ।
नेपालमा हालसम्म ५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये एक जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने अन्य चार जनाको विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ । हामीले यहाँ ती ब्यक्तिको अहिले कहाँ उपचार भइरहेको छ र स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे जानकारी दिँदै छौं ।
‘लक डाउन’को समयमा अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर निस्कन निषेध छ । यो समय सदुपयोग गर्न धेरैले पुस्तक अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, बजारमा गएर पुस्तक किन्ने सम्भावना छैन । अनलाइन अर्डर पनि बन्द भएका छन् । यस्तोमा अनलाइन नै एकमात्र विकल्प हो । यहाँ अनलाइनमा उपलब्ध हुने केही पुस्तक र तिनको संक्षिप्त चर्चा लिंकसहित गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकम मोबाइल वा फोनमा नम्बर डायल गर्नेबित्तिकै एउटा धूनसँगै सुनिन्छ– ‘कोभिड–१९ का मुख्य लक्षणहरू ।’ कोभिड–१९ को महामारीले सन्त्रस्त पारिरहेका नागरिकलाई हरेक कलमा यस्तो सन्देश सुनाउने व्यक्ति हुन्– सञ्चारकर्मी अनिता विन्दु ।
राजनीतिक दबाबमा काम गर्दिनँ !
न्यायको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुबराबर हो ।’ द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषय राष्ट्रिय एजेन्डा हुनुपर्छ । यसमा राजनीतिक पार्टीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
रोगी घोडा ट्राफिकलाई घाँडो
कुनै समय घाडाले सुन्धारा, भोटाहिटी, कालिमाटी, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वरलगायतका क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि काम गर्थे । आवश्यकताअनुसार चोक, सार्वजनिक स्थल र सवारी साधनको धेरै चाप हुने स्थानमा घोडाहरू परिचालन हुन्थे ।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण नेपालको पर्यटन र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा विस्तारै–विस्तारै प्रभाव पर्न थालेको छ । अधिकांश पर्यटकीय गन्तव्य सुनसान हुन थालेका छन् ।
मुस्ताङमा सडक दुर्घटना भयो भने त्यहाँ एम्बुलेन्स कहिले आउने ? स्थानीयले उद्धार गरे पनि अस्पताल कहाँ छ ? सडकमा प्रत्येक ५० किलोमिटरको अन्तरमा एउटा राम्रो सेवा–सुविधासम्पन्न अस्पताल हुनुपर्छ ।
निशा र याकपबीचमा अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा कुराकानी हुन्थ्यो । याकप आफूले नजानेका नेपाली शब्दको अर्थ निशासँग सोध्थे । नेपालमा हुने घटनाक्रमबारे जानकारी लिन्थे । उनी आफ्ना कुरा थोरै भन्थे, निशाको कुरा धेरै सुन्थे । उहाँले जुनसुकै कुरा पनि मलाई यस्तो लाग्छ, तिमीलाई के लाग्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । जे कुरामा पनि अरुको धारणा बुझ्न खोज्ने र त्यसको सम्मान गर्ने बानी मलाई एकदमै मन पथ्र्यो ।’
गर्भोत्सवको संस्कार नेपालमा कसरी बढ्दै छ
गर्भ देखाएर फोटो सुट गर्ने, बच्चाको बुबालाई गर्भमा चुम्बन गर्न लगाउने र तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने, रेस्टुराँ, पार्टी प्यालेस र घरमै पनि मदिरासहितको पार्टी गर्नेजस्ता कार्य गरेर गर्भावस्थाको सेलिब्रेसन गर्न थालिएको छ ।
देशमा आधा लाख नर्स बेरोजगार, जागिरमा हुनेले पनि उचित तलब पाउँदैनन् । नर्सहरू आफ्नो पीडा खुलेर साट्न चाहँदैनन् । एकातर्फ आफूले काम गरिरहेको संस्थाको विरोध गर्दा जागिर जाने डर छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो अवस्थाबारे बोल्दा जागिर नपाउने डर । यसबीच कोही विदेशका लागि प्रयास गरिरहेका छन् त कोही सरकारी सेवामा दरबन्दी खुल्ने आशामा बसिरहेका छन् ।
राइडिङ एपका जागिरेको कथा
मेरो बुबाको निधन भइसकेको छ । परिवारमा आमा, दिदी र म छौँ । छोरा भएको नाताले ममा पारिवारिक जिम्मेवारी थपिनु स्वाभाविक छ । र, मैले अहिलेसम्म त्यो पूरा गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ । दिनमा २०–२२ ट्रिपसम्म गर्न सक्छु । २ हजारदेखि २५ सयसम्म कमाइ हुन्छ । कलेज हुँदा पनि १० देखि १५ ट्रिपसम्म गर्थेँ ।
पछिल्लो समय मोबाइल एपमार्फत दुईपाङ्ग्रे यात्रुवाहक सेवाप्रदायक सवारीको यात्रा गर्नेहरूको संख्या लाखमा छ । पठाओ, टुटल, सरर हुँदै यस्ता सेवाप्रदायक कम्पनी खोल्नेहरूको जमात बढिरहेको छ।